पाठ - १ कम्प्युटरको आधारभूत ज्ञान तथा सिप (Fundamental Knowledge and Skill of Computer) | कम्प्युटर शिक्षा कक्षा ७
कम्प्युटरको आधारभूत ज्ञान तथा सिप (Fundamental Knowledge and Skill of Computer)
पाठ - १ कम्प्युटरको आधारभूत ज्ञान तथा सिप | कम्प्युटर शिक्षा कक्षा ७
कम्प्युटर एउटा विद्युतीय उपकरण हो । यसले हामीसँग हाम्रा अप्रशोधित डाटा लिई प्रशोधन (process) गरेर महत्त्वपूर्ण सूचना उपलब्ध गराउँछ । कम्प्युटर शब्द ल्याटिन (Latin) भाषाको कम्प्युटेयर (computare) बाट आएको हो। यसको अर्थ हिसाब (calculate) गर्नु हुन्छ । त्यसैले कम्प्युटरलाई सामान्यतया हिसाब गर्ने आधुनिक विद्युतीय उपकरणका रूपमा लिइन्छ । यसले हरेक किसिमका गणितीय हिसाब (mathematical calculation) लगायत तार्किक (logical) कार्य सम्पादन पनि गर्छ । कम्प्युटरले हाम्रो जीवनमा ठुलो प्रभाव पारेको छ । यसले हाम्रो जीवन शैलीमा परिर्वतन ल्याएको छ । साधारण चिठी पत्र टाइप गर्न र भिडियो गेम खेल्न मात्र नभई वैज्ञानिक खोज, मौसमको अनुमान, मिसाइलहरूको नियन्त्रण, चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान र सञ्चार जगतमा पनि कम्प्युटरको प्रयोग भएको छ।
कम्प्युटरको काम गर्ने सिद्धान्त (Working Principle of Computer)
कम्प्युटरले सामान्यतया इन्पुट, प्रोसेस र आउटपुट (input, process and output) को सिद्धान्तमा आधारित भएर काम गर्छ, जसलाई छोटकरीमा (IPO) को सिद्धान्त पनि भनिन्छ । तलको चित्रमा यसको काम गर्ने सिद्धान्त स्पस्ट पारिएको छ ।
इन्पुट (Input) => प्रोसेस (Process) =>आउटपुट (Output)
कम्प्युटरलाई यसको काम गर्ने सिद्धान्तका आधारमा पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । कम्प्युटर भनेको अप्रशोधित डाटाहरूलाई प्रशोधन गर्ने विद्युतीय उपकरण हो । जसले अप्रशोधित डाटालाई इन्पुट
उपकरण (input device) मार्फत लिने, प्रशोधन उपकरण (processing device) मा प्रशोधन गर्ने र आउटपुट उपकरण (putput device) मार्फत प्रशोधन भएको परिणाम (processing result) उपलब्ध गराउने काम गर्छ।
इन्पुट भनेको कम्प्युटरले अप्रशोधित डाटा लिने प्रक्रिया हो । यो कार्य कम्प्युटरको इन्पुट उपकरणमार्फत गरिन्छ । किबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ज्वाइस्टिक (keyboard, mouse, microphone, joystick) हरू कम्प्युटरको इन्पुट उपकरणअन्तर्गत पर्दछन् । यसमध्ये किबोर्ड र माउसचाहिँ सबै कम्प्युटरमा हुने अनिवार्य इन्पुट उपकरण हुन्।
प्रशोधन भनेको इन्पुट गरिएका अप्रशोधित डाटालाई हामीले दिएको निर्देशन (instruction) अनुसार प्रशोधन गर्ने प्रक्रिया हो । यो कार्य कम्प्युटरको प्रशोधन उपकरणअन्तर्गत हुन्छ । सिपियु (CPU-central processing unit) कम्प्युटरको प्रशोधन उपकरण हो।
निष्कासन/उत्पादन (output) भनेको प्रशोधन उपकरणमा प्रशोधन भएको परिणाम (result) हामीलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया हो । यो काम कम्प्युटरको आउटपुट उपकरण (output device) अन्तर्गत हुन्छ। मोनिटर, प्रिन्टर, स्पिकर (monitor, printer, speaker) आदि कम्प्युटरका आउटपुट उपकरण हुन्।
कम्प्यटर अरू विद्युतीय उपकरणभन्दा छुट्टै किसिमको शक्तिशाली विद्युतीय उपकरण हो। यसमा नयाँ नयाँ किसिमका विशेषता छन् । तीमध्ये भन्डारण गर्ने विशेषता महत्त्वपूर्ण छ । यसमा हामीले किबोर्डबाट टाइप गरेका डाटा र प्रशोधन उपकरणमा प्रशोधन भाव परिणामलाई अस्थायी वा स्थायी रूपमा भन्डारण गर्न सकिन्छ । स्थायी रूपमा भन्डारण भएको डाटा वा प्रशोधन भएको परिणाम भविष्यमा पनि हामीले चाहेका बेला आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
कम्प्युटरले भन्डारण गर्ने कार्य भन्डारण उपकरणमा गर्छ । उदाहरणका लागि र्‍याम (RAM-Random Access Memory), हार्डडिस्क (Hard Disk), अप्टिकल डिस्क (Optical Disk), फ्ल्यास मेमोरी (Flash Memory/Pen Drive) आदी भन्डारण उपकरण हुन् । र्‍याम र हार्डडिस्क कम्प्युटरका अनिवार्य भन्डारण गर्ने उपकरण हुन् । र्‍याम (RAM) अस्थायी भण्डारण उपकरण हो भने हार्ड डिस्क, अप्टिकल डिस्क, फ्ल्यास मेमोरी स्थायी भन्डारण गर्ने उपकरण हुन् ।
कम्प्यूटर र यसमा प्रयोग भएका उपकरणका बारेमा छलफल गरेर कम्प्युटरका विभिन्न भाग बनाई कक्षा कोठामा टाँस ।
(क) कम्प्युटर एक ........... उपकरण हो ।
(ख) कम्प्युटर .................. शब्द .................. बाट आएको हो।
(ग) कम्प्युटरको .............. भागमा अस्थायी रूपमा डाटा भन्डारण हुने गर्दछ।
(घ) किबोर्ड कम्प्युटरको .......... उपकरण हो।
(ङ) Hard disk मा आँकडा ........ रूपमा भन्डारण गरिन्छ।
(क) कम्प्युटरले तार्किक कार्य गर्छ ।
(ख) हामीले निर्देशन दिएपछि मात्र कम्प्युटरले कार्य गर्छ ।
(ग) प्रिन्टर प्रशोधन उपकरण हो।
(घ) फ्ल्यास मेमोरी अस्थायी भन्डारण यन्त्र हो।
(ङ) हार्ड डिस्क भन्डारण उपकरण हो।
(क) कम्प्युटर भनेको के हो ? यो कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ ?
(ख) कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ ?
Basic Level Computer Education Grade VII Grade VII - Computer
ESikai Online Education: पाठ - १ कम्प्युटरको आधारभूत ज्ञान तथा सिप (Fundamental Knowledge and Skill of Computer) | कम्प्युटर शिक्षा कक्षा ७